Mali: Xisbiyo dhowr ah ayaa diidaya dib-u-eegista dastuurka - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »Mali: Xisbiyo badan ayaa diidey dib-u-eegista dastuurka - JeuneAfrique.com
Mali: Xisbiyo dhowr ah ayaa diidaya dib-u-eegista dastuurka - JeuneAfrique.com
11 April April ayaa lagu wareejiyay hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed iyo ururrada bulshada rayidka ah oo nuqul ka ah dib-u-eegista dastuurka, Natiijada shaqada guddiga khubarada. Muddo saddex bilood ah, ay ka shaqeyneysey, "iyada oo la tixgelinayo qodobada hay'adaha ee heshiiskii nabadda iyo dib u heshiisiinta" iyo "soo jeedinta la xidhiidha isku day hore oo dib u eegis dastuurka," ayuu yiri Professor Makan Moussa Sissoko , madaxa guddiga.
Natiijada: qoraalka soo jeediya, iyo waxyaabo kale, si loo mideeyo hay'adaha ka mas'uulka ah doorashooyinka hal mar madaxbannaan oo joogto ah. Waxay sidoo kale bixisaa baabi'inta Maxkamadda Sare ee Cadaaladda liiska hay'adaha Jamhuuriyadda si ay uga dhigaan maxkamad hoy la'aan ah.
Khubarada ayaa sidoo kale bixiyaan "gebi ahaan qufulka" maqaalka 30 Dastuurka oo qeexaya in "Madaxweynaha Jamhuuriyada la doorto muddo shan sano ah by xilldhibaan oo toos ah iyo cod aqlabiyad ah in laba wareeg." Sida laga soo xigtay this article, madaxweynaha dib loo doortay mar keliya. "Tirada iyo muddada xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda aan la beddeli karin," ayaa shaaca ka qaaday Sidi Mohamed Diawara, metalaa of guddi khubaro ah. In version ee hadda qoraalka, "dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa iyo kobcinta sharci darrada ah uu noqonayaa waajib ku ah muwaadiniinta, iyo argagixisada waxa loo arkaa dambi ah imprescriptible ka gees ah dadka Mali," ayaa sidoo kale sheegay metalaa.
Xalna adag tahay
Marka la eego mudnaanta, soo jeedinnada dib-u-habeyn dhowr ah waa kuwo aan isku mid ahayn, halkii foomku waa dhibaato. Tan iyo markii dib loo soo nooleeyay qabyo-qoraalka Dastuurka ee uu ku dhaartey Malians bilowga sanadka, IBK waxay ku adkeysaneysaa baahida loo qabo geedi socodka loo dhan yahay, si looga fogaado fiiso 2017. Madaxweynuhu waa inuu ka soo laabto cadaadiska wadada isaga oo ka horjeeda mashruuciisa. Laakiin afar bilood kadib, kala duwanaanshaha sida loo wajaho dib-u-eegista Dastuurka waa mid sii wata. Qaabka guud ee wadatashiyada ee ay hogaaminayso Wasaaradda Dhulka iyo Meel-marinta (MATD) ayaa niyad-jab ku sameeya dhinacyo badan. Tani waxa la filayaa in lagu sameeyo xukuumadda, xisbiyada siyaasadeed, ururada bulshada rayidka ah iyo sidoo kale kooxaha hubaysan.
Dhowr xisbi ayaa xitaa hoos u dhigay casuumaadda IBK ee booqashada Koulouba bishii April 11. Tani waa arrin la taaban karo oo ah Kacaanka Dib u Dhiska Dimuqraadiyadda (FSD), kaas oo isu keenaya dhinacyada mucaaradka - Midawga Jamhuuriyadda iyo Dimuqraadiyadda (URD) ​​ee Soumaïla Cissé et Xisbiga Waddaniga ah ee Qaranka (Parena) ee Tiébile Dramé - iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ah.
Sababta wanaagsan, Nouhoum Togo, oo ka mid ah afhayeennada mucaaradka ayaa tilmaamaya, in aan dambe la xidhiidhin qorshaha dukumiintiga. "Looma xiriirin shaqadan. Waxaa jira nidaamyo lagu ixtiraamo mana nihin nafteena in dastuurka qabyada ah oo aan naga dhigin, "ayuu yidhi, isagoo qiray in URD, xisbigii hogaamiyaha Mucaaradka ayaa diyaariyay dukumeenti loo soo gudbiyay khubarada ka masuulka ah dib-u-eegista Dastuurka.
"Dib-u-habeyn kasta waa inuu ka yimaadaa wadahadal siyaasadeed oo qaran. Tani maahan kiiska maanta, "ayuu ku daray Nouhoum Sarr, oo xubin ka ah FSD. "Su'aasha ah in dib-u-habaynta Dastuurka waa in la dhigo Maliya shirweyne qaran. Laakiin taasi ma ahan mawqifkooda maanta. Malians waxay doonayaan dhamaystirka xasuuqyada, xiisadaha bulshada iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha, "ayaa intaa raaciyay mid ka mid ahaa afhayeenka Soumaïla Cissé ee doorashadii madaxweynaha ee 2018.
Aragtida ah in wadaagista Maxamed Youssouf Dhab ahaan, Aka Ras Bath, Afhayeenka Guud ee Ciidanka Difaaca Jamhuuriyadda (CDR), horudhac dibadbaxyo ka dhan ah dib-u-eegista Dastuurka ee 2017. Dhaqdhaqaaqa, "dib-u-habeyn ama dib-u-eegis lama samayn karo marxaladda siyaasadeed ee hadda jirta iyo ammaanka".
Aftida loo qorsheeyay bisha Juun
Xisbiga Yéléma, oo wakiil ka ahaa Koulouba bishii April 11 ayaa madaxweyne ku xigeenka 1er Abdoulaye Diarra, iyada oo qaybteeda dareemaysay in geeddi-socodku aanu ahayn mid u gooni ah. "Madaxweynaha Jamhuuriyaddu waa in uu naftiisa u huro tallaabooyin siyaasadeed si loo gaaro heshiis wadajir ah oo heer qaran ah. Waa lagama-maarmaan in la hormariyo wadahadalka oo la bilaabay Soumaïla Cissé. Waxaan markaa go'aan ka gaari doonaa kooxda iyo barnaamijka si aan u fulino si aan u fulino isbeddeladan. Tani waxay ku saleysan tahay dukumintiga guddiga, "ayuu yiri Moussa Mara, madaxweynaha xisbiga iyo ra'iisul-wasaarihii hore.
kulan u dhexeeya hore February IBK iyo hoggaamiyaha mucaaradka ayaa soo sara kiciyey rajo siyaasad aysan ka hor ay dhacdo in Bamako on April 5 in ay ku weerarto dhibaatooyinka ammaanka iyo maamul xumada.
Aftida dastuurka waxaa loo qorsheeyay Juun 2019, sida ku cad taariikhda MATD. Wareysi lala yeeshay raadiyaha Mikado, Mahamat Saleh Annadif, oo ah madaxa Minusma, howlgalka Qaramada Midoobay ee Mali ayaa ka digtay: "Dib-u-eegista Dastuurka ee Mali waa inaanay noqonin xayiraad dhex marta Malia".
🔴 "Dib-u-eegista dastuuriga ah waa inaan loo aqoonsan sida dalab dibadda ah ... Waa wax badan oo ka badan baahida guud ee Maleysiga. Waxay faa'iido u tahay diidmada dimuqraadiga ah #Mali", Sida laga soo xigtay madaxa of @UN_MINUSMA Mahamat S. Annadif. 🇲🇱 pic.twitter.com/YnU1WISEVd
Algeria: Dibadbax balaadhan oo cusub, maxay Bensalah samayn doontaa?
Cameroon - Paul Biya ayaa ku dhawaaqay socdaalka Yurub: Safaaradda Cameroon ee Jarmalka oo heegan ah